ktmkhabar.com - किन छाडे १० सांसदले महन्थ ठाकुरको साथ ?
किन छाडे १० सांसदले महन्थ ठाकुरको साथ ?
प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई हटाउने जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहको प्रयास सफल नहुने देखिएको छ । उल्टै ठाकुर समूहका १० प्रदेश सभा सांसदले उनको साथ छाडेका छन् ।
जसपाको ठाकुर समूहमा २५ जना सांसद थिए । जसमध्ये १० जनाले गुट परिवर्तन गरी उपेन्द्र यादव समूहमा गएपछि १५ जनामात्र पक्षमा रहेका छन् ।
प्रदेश २ मा जसपाका ५५ सांसद छन् । जसपा एकीकरणपूर्व उपेन्द्र यादव समूहका ३० जना र महन्थ ठाकुर समूहका २५ जना थिए । अहिले यादव समूहमा ४५ र ठाकुर समूहमा १५ जना मात्र छन् ।
मन्त्री रहेका नवलकिशोर साहलगायतले ठाकुर समूह छाडेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जसपाको महन्थ ठाकुर समूह सहभागी भएपछि केन्द्रमा निकै ठूलो विवाद चलिरहेको छ । त्यसको असर प्रदेश २ को सत्तासमिकरणमा पर्ने देखिएको छ ।
ठाकुर समूहमा सांसदहरुको संख्या घट्दै गएपछि मनिष सुमनको मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास विफल भएको छ । बरु उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउने तयारी भएको बुझिएको छ ।
ठाकुर समूह प्रदेश २ मा कमजोर भएपछि केन्द्रको विवादको असर प्रदेशमा पर्न दिनुहुँदैन भन्दै महन्थ ठाकुरले आफूपक्षीय प्रदेशका नेताहरुलाई सक्रिय बनाएका छन् । तर, उपेन्द्र यादव ठाकुर समूहमाथि कडा बन्ने तयारीमा छन् ।
अर्को रोचक पक्ष, जसपाको ठाकुर समूहको कार्यकारिणी समिति यादव समुदाय रहित भइसकेको छ । तर, प्रदेश २ मा यादवको बाहुल्यता रहेकाले आगामी चुनावमा यसरी नै अगाडि बढेमा ठाकुरलाई ठूलो झट्का लाग्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
समाजवादी पार्टी नेपाल फुट्न लाग्दा राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता भएको थियो । एकतापछि जसपा बनेकोमा महन्थ ठाकुर समूहलाई संगठनमा ठूलो धक्का लागेको छ । उनको समूहका अधिकांश नेताहरुले साथ छाडेका छन् ।
उपेन्द्र यादवजनता समाजवादी पार्टीमहन्थ ठाकुर